Akhriso:Sharciga doorashooyinka oo lagu kordhiyay qodob kala dhantaalaya awooda madaxwaynaha ee hada - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Akhriso:Sharciga doorashooyinka oo lagu kordhiyay qodob kala dhantaalaya awooda madaxwaynaha ee hada
Akhriso:Sharciga doorashooyinka oo lagu kordhiyay qodob kala dhantaalaya awooda madaxwaynaha ee hada
December 26, 2019 December 26, 2019 Duceysane987
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta loo qeybiyay sharciga doorashooyinka qaranka ee heer Federaal, kaasoo muddooyinkii u dambeeyay ay dood kulul ka lahaayeen Xildhibaanada.
Sharcigan loo qeybiyay Xildhibaanada ayaa wax ka bedel badan lagu soo sameeyay, iyadoo intii doodda socotay lagu daray aragtiyo iyo fikrado ay ka dhiibteen sharciga Xildhibaanada, waxaana lagu wadaa in kama dambeys Xildhibaanada ay cod u qaadaan maalmaha soo socda.
Qodobka 11aad ee Sharciga Doorashooyinka ayaa dhigaya in Madaxweynaha ay wadajir u dooranayaan Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka, iyadoo loo raacayo qodobka 89aad ee dastuurka, iyadoo nidaamka xukunka dowladda uu yahay mid Baarlamaani ah.
Arrinta ku cusub sharcigan ayaa ah in Madaxweynaha uu xilka Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ka soo magacaabayo Xisbiga ama Isbaheysiga doorashada ku guuleysta kuraasta ugu badan Aqlabiyadda Baarlamaanka ( 50%+1), taasoo macnaheedu tahay in Madaxweynaha aanu laheyn doorasho uu iskiis ku soo xusho Ra’iisul Wasaare.
Qodobkan ayaa kala dhantaalaya Awoodda Madaxweynaha ee ku aadan xulashadiisa qofka uu u magacaabayo xilka Ra’iisul Wasaaraha, taasoo ka dhigan in Xisbigii hela kuraasta ugu badan ee Aqlabiyadda Baarlamaanka inuu ka imaanayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda.
Halkan hoose ka akhriso Sharciga Doorashooyinka Qaranka ee Heer Federaal oo dhameystiran:-
Kooxo hubaysan oo ku weeraray dhuusamareeb gudoomiyihii hore ee D.Hodan
Jowhar:Askari wiil dhalinyaro ah u dilay shan kun oo shilling soomaali ah
Sawirro: Shirweynaha Dhalinyarada Galmudug oo Cadaado ka furmay
Shirka Mashaariicda horumarineed ee Dalka oo lagu qabtay Muqdisho (Sawirro)
Wasiirka Arrimaha Gudaha Hir-shabeelle Oo Xilkii Ka Qaaday Duqa Balad-weyn (Akhriso)